Lamba Lamba Tactile
Lamba Lamba Tactile Niasa amin'ny jacquard universite erak'izao tontolo izao fa mpandika teny ho an'ny jamba. Ity lamba ity dia azon'ny olona vakiana tsara ary natao ho azy ireo ny hanampy ireo jamba izay tsy mahita intsony na manana olana amin'ny fahitana; Mba hianarana ny rafi-dalàna braille miaraka amina fitaovana somary sariaka sy mahazatra: lamba. Ahitana ny marika, isa ary marika famantarana. Tsy misy loko ampiana. Izy io dia vokatra eo amin'ny marika volo fotsy ho toy ny fitsipiky ny tsy fahitana mazava. Tetikasa misy dikany ara-tsosialy izy io ary mihoatra ny lamba ara-barotra.
Asabotsy 22 Aogositra 2020
Faucets Electra izay noheverina ho solontena fampiasana nomerika amin'ny sehatry ny armature dia mampifangaro ny teknolojia miaraka amina endrika hoentina hanamafisana ny famolavolana fahantrana taona. Ny faucets izay tsy manana sara manokana dia manintona ny rehetra noho ny hatsaran-tarehy sy ny fahitana azy matotra no manapa-kevitra ny mampiavaka azy amin'ny faritra mando. Manome vahaolana ho an'ny mpampiasa ergonomika kokoa ireo bokotra fanasongadinana fanendry an'i Electra. Ny "Eco Mind" amin'ireo faucets dia manome ny mpampiasa mahomby indrindra amin'ny famonjena. Ity fiasa ity dia manome lanja manokana ny taranaka ho avy
Zoma 21 Aogositra 2020
Birao Birao Ny foiben'ny famoronana C&C Design dia ao amin'ny atrikasa aorian'ny asa indostrialy. Ny fananganana azy dia novaina tamin'ny tranobe fananganana biriky mena tamin'ny taona 1960. Ho fijerena ny fiarovana ny zava-misy ankehitriny sy ny fahatsiarovana ny tantaran'ny trano, ny ekipa Design dia nanandrana nanao izay ho afany mba hialana amin'ny fanimbana ny trano tany am-boalohany ao anaty haingon-trano anatiny.Aran'ny afo sy volotsangana no ampiasaina amin'ny famolavolana anatiny. Ny fanokafana sy fanidiana, ary ny fanovana ny habaka dia nofinofina tsara.Ny endriny jiro ho an'ny faritra samihafa dia taratry ny habakabaka hita maso.
Ny Dabilio Eny An-Dalambe
Alakamisy 20 Aogositra 2020
Ny Dabilio Eny An-Dalambe Ity dabilio ity, natao tamin'ny alàlan'ny paikady famolavolana haino aman-jery, dia mandeha amin'ny ambaratonga vaovao. Mitovy amin'ny trano an-tanàn-dehibe na manodidina ny voajanahary, ny tsiran-tsolika dia mamorona safidy misy seza isan-karazany ao anaty kianja iray. Ny akora ampiasaina dia aluminium voatsangana ho an'ny fototra sy ny vy ho an'ny seza, nofidina ho an'ny toetrany azo averina sy maharitra; Manana vovony matevina sy matevina mifangaro vita tsara izy io ho an'ny fampiasana any ivelany amin'ny toetr'andro rehetra. Natao tao Mexico City nataon'i Daniel Olvera, Hiroshi Ikenaga, Alice Pegman ary Karime Tosca.
Alarobia 19 Aogositra 2020
Faucet Ny serie Amphora dia namboarina hampifandray ny lasa sy ny ho avy ary manome fotoana hiainana ny fototra sy fiasan'ny fahagola. Tsy mora izany amin'izao fotoana izao raha mahatafiditra ny loharanon'ny loharanon-karena iainantsika androtrizay. Ny endrika tsy mahazatra Faucet dia efa taonjato maro talohan'izao, fa ny ampitson'iny rano dia mitondra rahampitso. Faucet retro novolavolaina tamin'ny loharanon-dàlana an-dalambe fahiny ary nitondra estetika ho an'ny efitrano fidiovanao.
Talata 18 Aogositra 2020
Washbasin SEREL Wave washbasin dia manome ny toerany ao amin'ny efitrano fandroana maoderina miaraka amin'ny laharana nomininy, vahaolana ampiasaina ary kalitao mahafinaritra. SEREL Wave washbasin; raha manova ny fomba fijerin'ny basikera indroa misy ankehitriny amin'ny endrika vongany tsy manam-paharoa izy io dia tafiditra ao koa ny fampiasana ny olon-dehibe sy ny zaza miaraka amin'ny endrika aestetika azy. Ho fanampin'ny fampiasana azy amin'ny alàlan'ny fizakan-jaza dia manome fiasa amin'ny fandroahana sy fanadiovana kiraro izay ampiasaina amin'ny kolontsaina silamo. Ny fomba fiasa ankapobeny amin'ny famolavolana ny fandroana dia ny modernisma sy ny fampiharana. Ity fomba ity dia misy fiantraikany amin'ny famolavolana lehibe indrindra.
Lamba Lamba Tactile Faucets Birao Birao Ny Dabilio Eny An-Dalambe Faucet Washbasin